Waayeelkii caanka noqday ee dhaqaalaha ka sameeya Youtube - BBC News Somali
Waayeelkii caanka noqday ee dhaqaalaha ka sameeya Youtube
Arumugam waa 60 jir u dhashay dalka Hindiya
Arumugam oo ah 60 jir u dhashay dalka Hindiya wuxuu caan ka noqday dalkaas iyo guud ahaan caalamka. Waa awoowe kusoo caan baxay karinta cuntooyiinka kala duwan, kuwaas oo muqaal laga duubo, ka dibna la soo dhigo baraha bulshada.
Wuxuu kasbaday quluubta malaayiin qof, kuwaas oo ku taxan cinwaanka uu ku leeyahay YouTube-ka.
Muuqaalada laga duubo cuntooyinka uu kariyo waxaa YouTube ka daawata malaayin qof, kuwaas oo aad uga hela raashiinka uu kariyo iyo qaabka uu u kariyo.
Raashiinka uu kariyo oo u badan cuntooyiinka dhaqanka ee Hindiya ayaa ah kuwa uu si wanaagsan u kariyo, wuxuuna ku kariyaa meel bannaan ah.
Shaqada uu qabto waxaa aqoonsatay shirkadda YouTube waxayna siisay abaalmarino kal duwan.
Kahor inta uusan bilaabin muuqaallada YouTube-ka uu soo geliyo wuxuu ka soo shaqeeyay meelo kala duwan.
"Waxaan shaqooyin yaryar ka soo qabtay meelo kale oo dalka Hindiya, waxaan sidoo kale ka soo shaqeeyay ganacsiyo kala duwan oo ku yaala Delhi, Mumbai iyo Kolkata. Waxaan maqaaxi yar ku karin jiray tuulada aan ka soo jeedo oo ku tala gobolka Tamil Nadu, inkastoo markii dambe ay iga soo xirantay ", ayuu yiri.
Wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Gopinath ayaa sheegay in aabihii uu waligiiba yaqaanay cunta karinta, balse laba sano kahor uu isaga ku dhiirageliyay in muuqaal laga duubo, si loo soo dhigo baraha bulshada, dadkuna ay u daawadaan.
Burcad loo bixiyay 'cun oo carar' oo weerar ku haysa makhaayadaha Spain
Duullimaad diyaaradeed oo loo hakiyay wax usoo uray rakaabka
Dhaqaalaha uu ka sameeyo Youtube-ka
Xigashada Sawirka, Food Factory
Raashinka uu kariyo waxaa kamid ah bariiska , hilibka iyo digaaga
Ninkan 60 sano jirka ah wuxuu sheegay in shaqadiisii xilligaas oo ahayd rinji marinta guryaha uu iska dhaafay ka dib hadalkii wiilkiisa.
"Wiilkeyga ayaa igu yiri iska dhaaf shaqada rinji marinta guryaha, oo aan kaa sameyno muuqaal cunta karinta, balse anigu markii koowaad waan diiday, ugu dambeynna waan aqbalay; bishii koobaad waxaan sameynay shan muuqaal oo aan soo dhignay YouTube-ka, waxaana ka helnay lacag gaareysa $100 dolar, waxaana is iri- waa lacag yar marka loo eego shaqada culus ", ayuu raaciyay.
Waxaa kale oo uu sheegay in bishii xigtay uu muuqaalada cunta karinta ka helay dhaqaale dhan $560 doolar oo "ka fiicneyd bishii hore", balse bishii saddexadana wuxuu ka helay $1,000 doolar.
Gopintah oo ah wiilka odaygan ayaa isna BBC-da u sheegay in muuqaalada cunta karinta ee aabihii ay caan ka noqdeen guud ahaan dalka Hindiya.
"Aniga, xaskeyga, hooyadey iyo aabahay dhamaanteen waan wada garaneynaa cunta karinta, marka waxaan u arkay in YouTube-ka uu yahay halka ugu wanaagsan ee aan kusoo bandhigi karno xirfadeena cunta karinta, waxaana hubinay in waxa aan soo gelineybo uu yahay wax wanaagsan, si dadka uu usoo jiito, waana taas sababta aan usoo jiidanay dad badan ", ayuu yiri Gopinath.
Arumugam ayaa marka uu kariyo cuntada wuxuu sheegay in uu u qeybiyo dadka danyarta ah, si uu uga farxiyo.
Odaygan ayaa hadda dhaqaale badan bil walba ka sameeya muuqaallada cunta karinta ee la soo dhigo YouTube-ka, wuxuuna intaa raaciyay in shaqooyiin badan uu horay usoo qabtay, balse haatan uu caan ku noqday cunta karinta, wiilkiisana uu sabab u yahay.
Dad badan oo daafaha caalamka ku kala nool ayaa lacag badan ka sameeya muuqaallada kala duwan ee ay soo bandhigaan YouTube-ka. Dhaqaalahaas oo hadba ku xiran sida loo daawada muuqaallada, waxaa adag in la arko dadka da'da ah oo sameynaya shaqooyiinka noocan oo kale.